Global Voices teny Malagasy · 12 Febroary 2011
12 Febroary 2011
Tantara tamin'ny 12 Febroary 2011
Zimbaboe12 Febroary 2011
Ilay Ejiptiana mpitoraka bilaogy malaza Kareem Amer, fantatra amin'ny anarana hoe Abdulkareem Nabeel Sulaiman, dia nafahana, bitsika voamarina androany ireo. Kareem, izay niaraka tamin'ilay mpamokatra sarimihetsika mahaleotena Samir Eshra, dia 'nalaina an-keriny' andian-jiolajimboto rehefa nandao ny kianjan'i Tahrir ny 7 Febroary teo, natolotra ny mpitandro filaòinana avy eo ary nalefa...
Mitohy ny firavoravoana manerana izao tontolo izao taorian'ny vaovao nilaza fa nandao ny tanàna i Hosni Mubarak. Ilay mpanao jadona, izay nifehy an'i Ejipta nandritra ny taompolo telo, ary nandà ny hametra-pialàna tao anatin'ny 18 andro nisian'ny hetsi-bahoaka tsy nitsahatra nanehoan'ireo Ejiptiana ny fangatahan-dry zareo ny hialàny amin'ny fitondràna amin'ny...
Nanao filazana ny Governemanta Jordaniana mikasika ny fanamboarana sekoly ambonin'ny miaramila ao anatin'ny alan'ny Ajloun, iray amin'ireo faritra Jordaniana vitsy misy ala. Mila ny fanapahana hazo 2200 ity tetikasa ity, ao anatin'izany ireo karazana hazo efa miha-manjavona sy ireo hazo eritreretina ho efa 500 taona. Miaraka amin'izany, Maro ireo fikambanana...